တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA-AUG5-update « MMWeather Information BLOG
« မြစ်ရေကြီးမှုကိုလေ့လာခြင်း တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA အဆင့်-၂ သို့လျော့ကျ – အိုကီနာဝါကို စတင်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ »
By mmweather.ygn, on August 5th, 2011
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA(KABAYAN) မုန်တိုင်းမျက်စေ့ အိုကီနာဝါကျွန်းအရွယ်အစားခန့်ရှိ ….
အိုကီနာဝါကျွန်း အနီးမှ ဖြတ်သန်းပြီး အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိကာ တရုတ်ပြည်မကြီး အရှေ့တောင်ဘက် ဒေသများသို့ ဆက်လက် ဝင်ရောက်မည် ခန့်မှန်း ….
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA ၏ ကြီးမားသော မုန်တိုင်း မျက်စေ့သည် အိုကီနာဝါကျွန်း တောင်ဘက် ပင်လယ်ပြင်မှ ဖြေးညှင်းစွာ ဖြတ်သန်းနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။မုန်တိုင်းရွေ့လျားနှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် ၃ မိုင်မှ ၄ မိုင်ခန့်သာရှိပါသည်။
မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁၆ဝ ကီလိုမီတာ(၉၉.၄၂ မိုင်) မှ ၁၉၅ ကီလိုမီတာ(၁၂၁.၁၇ မိုင်) နှုန်းအထိရှိပြီး၊ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်း အမြင့် ၃၅ ပေ အထိ ရှီကြောင်း သိရပါသည်။ ယနေ့ သြဂုတ်လ ၅ ရက် သောကြာနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA သည် အိုကီနာဝါကျွန်း၊ နာဟာမြို့မှ ၉၁ ကီလိုမီတာဝေးသည့် နေရာအထိ ရွေ့လျားသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး၊ စနေနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်ကာ တရုတ်ပြည်မကြီး၏ အရှေ့တောင်ဘက် Shanghai နှင့် Jiangsu ခရိုင်များဆီသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် Jiangsu ခရိုင်အနီးသို့ စတင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ Shanghai မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၂၇၆ ကီလိုမီတာ(၁၇၁.၅ မိုင်) သို့ ရောက်ရှိဗဟိုပြုနေမည် ဖြစ်ကြောင်း Typhoon 2000 မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။
ယနေ့ သြဂုတ်လ ၅ ရက် သောကြာနေ့ – ဂျပန် စံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန် ၂ နာရီခွဲ နှုတ်၍တွက်ပါရန်) တွင် အိုကီနာဝါကျွန်း၊ Kadena လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း ၏ အနောက်တောင်ဘက် ၁ဝ၉ ကီလိုမီတာ(၆၇.၇၃ မိုင်) အကွာအဝေးမှ ဆက်လက် ဖြတ်သန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်ပြည်မကြီး – Jiangsu ခရိုင် ကမ်းရိုးတန်းဒေသသို့ အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဖြစ် ချဉ်းကပ်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ရှန်ဟိုင်းမြို့ စံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှ ၄ နာရီ ကြားတွင် ရှန်ဟိုင်းမြို့ အနီးသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
THIS AFTERNOON (FRI): Starts to move away from Okinawa…about 91 km WSW of Naha, Okinawa or 112 km SW of Kadena Air Base [2PM AUG 05: 25.8N 126.9E @ 160kph].
TOMORROW EARLY MORNING (SAT): Turns NW across the East China Sea, farther away from Okinawa…about 200 km WNW of Okinawa City [2AM AUG 06: 26.7N 125.8E @ 160kph].
TOMORROW AFTERNOON (SAT): Intensified slightly as it moves across the warm waters of the East China Sea…threatens Eastern China particularly Shanghai & Jiangsu Province…about 393 km East of Wenzhou, China 2PM AUG 06: 27.9N 124.7E @ 165kph].
SUNDAY EARLY MORNING: Nears Category3status…approaching the coast of Jiangsu Province…about 276 km SE of Shanghai, China [2AM AUG 07: 29.5N 123.5E @ 175kph].
OKINAWA ISLAND: Passing to the southwest of the island…about 109 km SW of Kadena Air Base [ETA: between 11:00 AM-1:00 PM Japan Time, Friday].
METROPOLITAN SHANGHAI: Just along the coast of Jiangsu Province, China…passing very close to the east of Shanghai [ETA: between 2:00-4:00 PM Shanghai Time, Sunday].
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA ၏ မျက်စေ့မှာ အချင်းမိုင် ၆၅ မိုင်ခန့် ရှိပြီး မုန်တိုင်း အရွယ်အစားမှာ အချင်း ၅၇၄.၅ မိုင် (၉၂၅ ကီလိုမီတာ) ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကြီးမားလှသည့် မုန်တိုင်း မျက်စေ့သည် အိုကီနာဝါကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံး၏ အတိုင်းအတာခန့် ရှိပါသည်။
The large ragged eye of Typhoon MUIFA (KABAYAN) moving offshore of Southern Okinawa…Northern Eyewall moving into Naha & Kadena Air Base…Typhoon Conditions expected. This system has just moved out of the Philippine Area of Responsibility (PAR).
Location of Eye: 25.3 degrees-N Lat 127.9 degrees-E Lon
MUIFA’s (KABAYAN) circulation remains circular and compact w/ thick raincloud convection on all quadrants. The typhoon continues to displayalarge ragged eye about 55 km across. Below is the summary of the storm’s parts and its hazards affecting specific areas:
EYE – over water (near the coast of Southern Okinawa)…not affecting any land areas. Possible calm and lull conditions (with <20 kph winds) can be expected inside the eye (click here to know more about the EYE).
EYEWALL – especially the northern part has started to move across the southern parts of Okinawa which includes Naha and Kadena Air Base. Typhoon Conditions with Typhoon Force Winds (>118 kph) can be expected within this wall (click here to know more about the Eyewall).
INNER RAINBANDS – spreading & affecting the rest of Okinawa and Southern Ryukyus. Tropical Storm Conditions w/ Tropical Storm Force Winds (62-117 kph) will be expected along these bands.
OUTER RAINBANDS – spreading & affecting Naje Island and Northern Ryukyus. Tropical Depression Conditions w/ moderate to strong winds (25-61 kph) will be expected along these bands (click here to know more about Rainbands).
24HR TOTAL RAINFALL ACCUMULATION – from5up to 200 mm (low to high rainfall) can be expected along the outer & inner rainbands, affecting Okinawa & the Ryukyus…with isolated amounts of up to 300 mm (high) near the center of MUIFA (KABAYAN) especially along the SW portion of the circulation. (click to open NOAA’s eTRaP graphic).
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိုးလေဝသဌာနများ၏ မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းပုံဖြစ်ပါသည်။ (အထက်ပုံ)
Uncategorized « မြစ်ရေကြီးမှုကိုလေ့လာခြင်း တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA အဆင့်-၂ သို့လျော့ကျ – အိုကီနာဝါကို စတင်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ »
3 comments to တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA-AUG5-update
Log in to Reply	Satellite Image of Typhoon Muifa (August42011)
Log in to Reply	လာမည့် ၄၈ နာရီမှ ၇၂ နာရီအတွင်း တရုတ်ပြည်မကြီး အရှေ့တောင်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းဒေသ Shanghai နှင့် Jiangsu ခရိုင်များ၏ ကမ်းရိုးတန်း၊ ရှန်ဟိုင်းလေဆိပ် အရှေ့ဘက် မိုင် ၅ဝ ခန့်မှ ကပ်၍ ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်မည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA ၏ လမ်းကြောင်းပြ ပုံ ဖြစ်ပါသည်
Log in to Reply	လာမည့် ၃၆ နာရီအတွင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့အား တိုင်းဖွန်းမုန်တိုင်း စတင်တိုက်ခတ်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ SHANGHAI — China Friday warned millions of people living along its east coast to stay indoors and cancelled more than 100 flights in preparation for the most powerful typhoon in years.
« မြစ်ရေကြီးမှုကိုလေ့လာခြင်း တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း MUIFA အဆင့်-၂ သို့လျော့ကျ – အိုကီနာဝါကို စတင်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum